Masuul Itoobiyaan ah oo lagu dilay Qaraxii Naasa Hablood 2 (Magaca & Xilka) – XAMAR POST
Masuul Itoobiyaan ah oo lagu dilay Qaraxii Naasa Hablood 2 (Magaca & Xilka)
Iyadoo ay marba marba ka dambeeyo sii badaneyso Khasaarihii ka dhashay Qaraxii iyo weerarkii lagu qaaday Hotel Naasa Hablood 2 ayey Xarakada Shabaab sheegatay inay ku dishay mas’uul ka tirsan Dowladda Itoobiya.
Mid kamid ah Websiteyada lagu qoro wararka Shabaab ayaa soo daabacay warbixin ku saabsan inay Al­Shabaab dileen Mas’uul sare oo ka tirsan Dowladda Itoobiya Warbaahinada Shabaab ayaa xaqiijinaya in mid kamida Mas’uuliyiinta safaaradda Itoobiya ee Soomaaliya lagu dilay weerarkii Hoteelka.
Diblumaasigan oo katirsanaa howlwadeenada Itoobiya uqaabilsan Soomaaliya ayaa lagu magacaabi jiray Abraha Weldi, waxaa xusid mudan in goobta weerarku ka dhacay dhowr boqol oo Mittir meel ujirta ay ku taal dhismaha safaaradda Itoobiya ee magaalada Muqdisho.
Weerarkii lagu qaaday Hotel Naasa Hablood 2 ayaa waxaa ka dhashay Khasaaro aad u badan oo isugu jiro Dhimasho iyo Dhaawac, waxaana Mas’uuliyiinta ilaa hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen kamid ah Wasiirkii Arrimaha Gudaha Koonfur Galbeed Madoobe Nuunow, Xildhibaan hore haddana ka tirsanaa Hey’adda Taakuleynta Ciidamada Dowladda oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Gaarane.
Dowladda Itoobiya ilaa hadda kama aysan hadlin dhimashada Abraha Weldi iyo sheegashada Shabaab, waxaana laga war sugayaa jawaabta ay Itoobiya ka bixi arrintaan iyo waxa ka jiro.
Madaxweyne Farmaajo oo la sheegay inuu tagi rabay Hotelka la Weeraray Ee Naasa-hablood 2
DEG DEG: Taliyeyaasha Nabad sugida & Booliska oo Xilalka laga qaaday